Royal Big Cat: ကြည့်သောသူမြင်၏
Showing posts with label ကြည့်သောသူမြင်၏. Show all posts
mail ထဲရောက်လာတာပါ ။ ဖုတ်ဖုတ်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း
နို့က ရွဲပြဲနေရင် စားရတာအရသာမရှိဘူးမလား ။ နို့ကောင်းဖို့လဲ အ ရေးကြီးတယ်။
ခင် အာ ကျယ်
စောက်ဆိုး ပို့လာတာပါ ။ လေကျယ် သ လောက် စောက်ခေါင်းကျယ်တဲ့
အိအိဖြိုး တဲ့ ။ပြည်ပ မှာစားပွဲထိုးလုပ်ကိုင် စားသောက်ပြီး fb မှာ
လေကျယ်နေသူလေးပါတဲ့ ။ သူ့ ဖုတ်ဖုတ်ထဲကို လီးထဲ့ဖူးတဲ့လူရှိရင်
ခေါ်ခဲ့လို့ ရေးပြီး သူ့ wall မှာကြေငြာဖူးတယ် ဆိုပဲ ။ အခုတော့ ဖျက်လိုက်ပြီတဲ့ ။
ရုပ်က တော့ ပန်းသေပန်းညှိုး ရုပ်ပါ ။ vzo မှာ masterbation လုပ်နေတဲ့ပုံထင် တယ် ။
mail ထဲကပုံပါပဲ ။
အားပါးတရ လိုးစေသတည်း ,..
စပွန်ဆာရှာပြီးပိုက်ဆံမက်တဲ့စော်တွေကပေါမှပေါ ။ စပွန်ဆာကောင်းကောင်း
ပေးနိုင်ရင် အဲ့လိုကုလားမျိုးကိုလဲကုန်းကြတာပဲ ...
ာ့- မွတ်စလင်မ်တွေ ဟတ်ဒ် ထိနေကြတယ်။
တမန်တော်ယုတ် မုဟမ္မဒ်အကြောင်း- လူတွေ သိကုန်မှာ သိပ်ကြောက်နေကြတယ်ပေါ့..
အနာပေါ်တုတ်ကျ ဆတ်ဆတ်ခါအောင်နာပြီး- ရီပို့တ်လုပ်လို့ ထပ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
အစ္စလာမ်မှာ မိန်းကလေးတွေမွေးရင် အစေ့ ကို ဓားနဲ့ ဖြတ်ပစ်ပါတယ်။ ယနေ့ ခေတ်အထိကို မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာကျင့်သုံးနေတုန်းပါပဲ။
အင်မတန် အောက်တန်းကျသလို အင်မတန်မှ လည်းသနားဖို့ ကောင်းတဲ့ မွတ်ဆလင်မိန်းကလေးတွေရဲ့ အဖိနှိပ်ခံဘ၀ပါ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးရာပါ ကိုယ်ပိုင် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကို သူသဘောမတူပဲ၊ ကလေးအရွယ်ဘ၀ကတည်း က လှီးဖြတ်ခံရတာဟာ- ယုတ်ညံ့လှတဲ့အစ္စလာမ်ကုရ်အာန်အယူဝါဒအရ - ယုတ်မာပက်စက်စွာ ရက်ရက်စက်စက် အလုပ်ခံရတာပါပဲ။
မုဟမ္မဒ်မှာ-မယား၂၂ယောက်နဲ့ လိင်ကျွန်အများအပြားရှိခဲ့တဲ့ အပြင်-
မုဟမ္မဒ်ဟာ အသက် ၅၄နှစ် အရွယ်မှာ ၉နှစ်အရွယ်ကလေးသူငယ်လေးကို လိင်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ အထိ အင်မတန်ယုတ်ကမ်းတဲ့ အောက်တန်းဇားမုဒိမ်းကောင်ကြီးမုဟမ္မဒ်ဖြစ်ပါတယ်
သိတဲ့အတိုင်း ကျွန်ကုန်သည်၊ လူသတ်သမား၊ တဏှာရူး၊ သုတ်ကြောင်၊ မုဒိမ်းကောင်မုဟမ္မဒ် စလိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါပဲ။
" A woman used to perform circumcision in Medina. The Prophet Mohammed ( PBUH ) said to her: " Do not cut too severely but remove the clitoris as that is better forawoman and more desirable forahusband." (Sunan Abu Dawud, Book 41, Number 5251)
မူဆလင်မတစ်ယောက် မက်ဒီနာမြို့တွင် အစေ့ဖြတ်ပေးလေ့ရှိသည်။ အစေ့ဖြတ်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်က ကြည့်ပြီး ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူသည်။
" အရမ်းကြီး မဖြတ်ပါနဲ့၊ အစေ့လေးကို ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။ အစိကို ဖြတ်ပစ်လိုက်တာက မူဆလင်မတွေ အတွက် ပိုကောင်းစေသလို၊ မူဆလင်မတွေရဲ့ ဘုံလင်ကြီး အတွက်လည်း အလွန်ကိုကောင်းစေပါတယ် " တဲ့။
Sunan Abu Dawad Book 41, Number 5251:
Abu Sahlieh further cited Muhammad as saying, " Circumcision is sunna ( tradition ) for the men and makruma ( honorable deed ) for the women. "
Al-shawkani, Nayl Al-awtar, Dar
Al-Jeel, Beirut, 1973, vol.1, page 139
ကျွန်ကုန်သည်၊ လူသတ်သမား၊ တဏှာရူး၊ သုတ်ကြောင်၊ မုဒိမ်းကောင်မုဟမ္မဒ် ဟာ လိင်နဲ့ပက်သက်လာရင် ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်ပါဘူး။
မူဆလင်မိန်းကလေးတွေ ရာသီလာနေရင်မသန့်ရှင်းလို့ ဗလီထဲဝင်လို့မရပါဘူးတဲ့။
မိန်းကလေးတွေ ရာသီလာနေစဉ်-စေတီတော်ပေါ်မသွားရဘူး ဆိုတာ ရှိလား ?
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ပြောခဲ့သလား ။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ဒီကိစ္စကို စိတ်မ၀င်စားဘူးလေ။
မိန်းကလေးတွေ ရာသီလာနေစဉ်- ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကို မတက်ရဘူးဆိုတာရှိလား?
ခရစ်တော်က ပြောခဲ့သလား။ မပြောခဲ့ဘူးလေ။ ခရစ်တော်နဲ့ မဆိုင်ဘူးလေ- ဒီကိစ္စ။
အစ္စလာမ်မှာ - မိန်းမတွေ ရာသီလာတဲ့ကိစ္စ- တမန်တော် မုဟမ္မဒ်နဲ့ဆိုင်သလား။?
သိပ်ဆိုင်တာပေါ့။ မုဟမ္မဒ်နဲ့ သိပ်ဆိုင်သွားပြီပေါ့
မိန်းမတွေ ရာသီလာတဲ့ကိစ္စဟာ တဏှာရူး၊ သုတ်ကြောင်၊ မုဒိမ်းကောင်မုဟမ္မဒ်အတွက် သိပ်ကို အရေးကြီးသွားပြီလေ။
မိန်းကလေးတွေ ရာသီလာတာ မလာတာ- မုဟမ္မဒ် သောက်လုပ်လား ?
မိန်းကလေးတွေ ရာသီသွေးဆင်းတဲ့ ကိစ္စဟာ - မုဟမ္မဒ် သောက်လုပ်လား ?
မူဆလင်မိန်းကလေးတွေ ရာသီလာနေစဉ် - မုဟမ္မဒ်က မထိခိုင်း၊ မကိုင်ခိုင်းပါဘူး။ ရွံစရာကောင်းလို့ပါတဲ့။
မုဟမ္မဒ် ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ ခံစားချက်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။
ဒီလိုပြောခဲ့ပေမယ့်လည်း မုဟမ္မဒ်ကိုယ်တိုင် - ရာသီသွေးဆင်းနေတဲ့ ကလေးမလေးရဲ့ ပေါင်ပေါ်မှာ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကို ရွတ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မုဟမ္မဒ်အနေနဲ့တော့ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကို ဆိုလို့ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ မုဟမ္မဒ် ပါးစပ်မှာ ယင်-တလောင်းလောင်းနဲ့ပေါ့။
အစ္စလာမ်ရဲ့ ဟတ်ဒီးတော်တွေမှာ ကို အတိအလင်းရေးထားတာပါ။
The Prophet Mohammed used to lean on my lap and recite Qur'an while I was in menses. (Sahih al-Bukhari, Volume 1, Book 6, Number 296)
The Prophet Mohammed used to recite the Quran with his head in my lap while I used to be in my periods (having menses). (Sahih al-Bukhari, Volume 9, Book 93, Number 639)
မုဟမ္မဒ် ရဲ့ မူမမှန်တဲ့ ဏှာစိတ်၊ မိန်းမတွေ ရာသီ ကိစ္စ။
အောက်ပိုင်းကိစ္စတွေနဲ့ ပက်သက်လာရင် မုဟမ္မဒ်ရဲ့ အမိန့်တော်တွေ လေ့လာကြည့်ပါ။ မူရင်းလင့်ခ်ကို သေချာ ဖတ်ရှုလေ့လာကြည့်ပါ။
ဒါတင်မက မိုဟာမက် ဟာ အာအိရှာ ရာသီသွေး ဆင်းနေချိန်မှာ ဘယ်လို FONDLE လုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာတွေပါ အတိအကျ ပါပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေ ရဲ့ အစိ ကိစ္စ- မုဟမ္မဒ် သောက်လုပ်လား ?
မိန်းကလေးတွေရဲ့ အစေ့ကို ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စဟာ မုဟမ္မဒ် အတွက် သိပ်ကို အရေးကြီးသွားပြီလေ။
မိန်းကလေးတွေ ဟိုပေါ်ဒီပေါ်ဝတ်တာ - မုဟမ္မဒ်နဲ့ဆိုင်လား ? သူ့သောက်လုပ်လား ?
မိန်းကလေးတွေ ဟိုပေါ်ဒီပေါ်ဝတ်တာ - မုဟမ္မဒ် နဲ့ တိုက်ရိုက်ပက်သတ်နေတဲ့အတွက် မုဟမ္မဒ်သောက်လုပ်ဖြစ်သွားပါပြီ။
ပေါ်တဲ့နေရာကို ငရဲမှာ မီးကင်ခံရမယ်တဲ့။ မူဆလင်မတွေ ကို အကြောက်တရားနဲ့ဖြဲခြောက်ထားတာ။
Sahih Bukhari – 4.54.460, 7.62.81; Sahih Muslim – 8.3367, 3368; Ghazali – vol 2, p. 43
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ လိင်မဆက်ဆံချင်ဘူးလို့ ( မိန်းမ၄ယောက် ရှယ်သုံးနေရတဲ့ ) ဘုံလင်ကြီးကို ငြင်းလိုက်တာဟာ ငရဲကျလောက်တဲ့ သောက်ပြစ်ကြီးပေါ့
အစ္စလာမ်ကုရ်အာန်အယူဝါဒအရ - မူဆလင်မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဟာ- လိင်ဆက်ဆံတာကို မခံချင်ဘူး ငြင်းတာနဲ့ ငရဲကျမယ်ဆိုတာ - ဖြစ်ကောဖြစ်နိုင်လား။ ဖြစ်ကော ဖြစ်သင့်လား၊ ? မူဆလင်မိန်းကလေးတွေ - ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့် ..
မုဟမ္မဒ်ဆိုတာ ဘယ်လိုကောင်မျိုးလဲဆိုတာ- ရေးရေးလေး အဖြေပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ဒါကြီး က သာမန်မှ မဟုတ်တာ....Reason ရှိရမယ်။
အဲဒီမှာမိုဟာမက်ကြီးက စိတ်အရမ်းဆိုးသွားပြီး ....
နွားသိုးကြိုးပြတ်ဖြစ်သွားပြီး အစ္စလာမ်မှာ မူဆလင်အမျိုးသမီးတွေဟာ ယောကျာ်းတွေရဲ့ ကာမကို စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေ...မပါသည်ဖြစ်စေ ....အချိန်မရွေး-ခံရမယ်။
ဘယ်လိုမှ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။
အစ္စလာမ်ဟတ်ဒီး တွေမှာကို အတိအလင်းရေးထားတာပါ။
ဟတ်ဒီးတော်တွေ ကို မှ မူဆလင်တွေ က ထပ်မံ ဗြောင်လိမ်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့...
အစ္စလာမ်မှာ ကုရ်အာန် နဲ့ ဟတ်ဒီးတော် ဆိုပြီး၂မျိုး ရှိပါတယ်
ဟတ်ဒီးကို ပယ်ရင် ကုရ်အာန်ကျန်ပါမယ်။
ကုရ်အာန်ကို ထပ်ပယ် လိုက်ရင် မူဆလင်ဘ၀က လွတ်မြောက်သွားပါပြီ။
ဟတ်ဒီး ရော၊ ကုရ်အာန်ရော ပါ ပယ်ပြီး မူဆလင်ဘ၀က လွတ်မြောက် ဖို့ ကြိုးစား ကြည့်ပါ။ :)
လူသားအသိဥာဏ်နဲ့ စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် မုဟမ္မဒ်ဆိုတဲ့ကောင် ဟာ ဘယ်လို ကောင်မျိုးလည်းဆိုတာ အလွယ်တကူသိနိုင်ပါတယ်။
အရင်ခေတ်တွေ က ဒီလို အချက်တွေရဲ့ ၁% လောက် ကို ပြောမိတာ နဲ့ လည်လှီးသတ်ပြီး အစ္စလာမ်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို မူဆလင်တွေ ဖုံးဖိကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်....
အခု အချိန်လို ...IT ခေတ်မှာ သက်သေ အထောက်အထား အပြည့်အစုံနဲ့ နိုင်ငံပေါင်းစုံ က ပညာရှင်တွေ...အချိန်ယူပြီး သေသေချာချာ လေ့လာဖေါ်ထုတ်တဲ့အခါမှာ.....
အနှစ်နှစ်အလလ မူဆလင်တွေ ....တစ်သက်လုံး ဖုံးဖိ လျှို့ဝှက်ထားခဲ့တဲ့ .......အစ္စလာမ်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ဘူးပေါ်သလို ပေါ်သွားတဲ့ နည်းတူ
လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံးရဲ့ ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့ အစ္စလာမ်ကုရ်အာန်အယူဝါဒရဲ့ ကျဆုံးခန်း ဟာလည်း တဖြည်းဖြည်း နီးကပ်လို့ လာနေပါပြီ။
အစ္စလာမ်ကုရ်အာန်အယူဝါဒအရ အစေ့ ကို ဓားနဲ့ ဖြတ်ပစ်ခြင်းအကြောင်းကို အသေးစိတ်သိလိုပါက
ရာသီသွေးဆင်းနေတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ ပေါင်ကြားမှာ ခေါင်းတင်ပြီး ကုရ်အာန်ကျမ်းကို ရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ မုဟမ္မဒ်
မုဟမ္မဒ်ကြီးဟာ တဏှာရူးပြီး ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်လိုက်၊ တစ်ခါတစ်ရံ မိန်းမစိတ်ပေါက်ပြီး မိန်းမအ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ပြီး မိန်းမကြီးလိုနေလိုက်....
သူနဲ့လင်မဆက်ဆံခြင်းဘူးငြင်းတဲ့ မိန်းမဟာ ငရဲကျမယ်လို့ မိန့်ကြားလိုက်တဲ့ မုဟမ္မဒ်
အသက်၅၄နှစ်အရွယ်မှာ သူ့မြေးလောက်ရှိတဲ့ ၉နှစ်အရွယ်ကလေးသူငယ်ကို လိင်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ ကလေးမုဒိမ်းကောင်ကြီးမုဟမ္မဒ်
( စကြာဝဠာတွင် အမြင့်မြတ်ဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ် )
ခေါင်းစဉ်ပါမလာတော့ ဘယ်လို နာမည်တက်ပေးရကောင်း မလဲ စဉ်းစားလို့ မရတော့လို့ ဒီအတိုင်းပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... သိတဲ့သူများ ရှိရင် ဖွသွားပေးပါဦး....
Posted by Myanmar Sex4You at 07:54 No comments: မိမိနှစ်သက်ရာ ရွေးချယ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်... မိမိတင်လိုသည်များကိုလည်း royalbigcat2013@googlemail.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်.. .comment ရေးသွားချင်လျင် no comment သို့မဟုတ် comment ကို ကလစ်ပါ.. Blogger ကြောင်ကြီး